भिजिट ‘भिषामा मानव तस्करी गर्ने गिरोहमा समलग्न बेनी कार्की’ महेश बस्नेतका कार्यकर्ता ! | Diyopost - ओझेलको खबर भिजिट ‘भिषामा मानव तस्करी गर्ने गिरोहमा समलग्न बेनी कार्की’ महेश बस्नेतका कार्यकर्ता ! | Diyopost - ओझेलको खबर
भिजिट ‘भिषामा मानव तस्करी गर्ने गिरोहमा समलग्न बेनी कार्की’ महेश बस्नेतका कार्यकर्ता !
दियो पोस्ट मंगलबार, माघ ११, २०७८ | १७:२७:४०
काठमाडौं । भिजिट भिषाको नाममा मानव तस्करी गर्ने गिरोहको नाइके तथा त्रिनेत्र म्यानेजमेन्ट एण्ड कन्सल्टेसीजका मालिक कोमलराज उपाध्यायबारे नेपाल सरकारका विभिन्न निकायले छानबीन अघि बढाएका छन् । नेपालबाट मानव तस्करीको ठूलो धन्दा चलाइरहेको यो समुहमा युवा संघ नेपालका एक सचिवालय सदस्य समेत समलग्न भएको पाइएको छ ।
आफूलाई नेकपा एमाले निकट युवा संघको केन्द्रीय सचिवालय सदस्य बताउने बेनी कार्की समेत कोमलको मानव तस्करी गर्ने गिरोहसँग समलग्न रहेको पाइएको छ । कार्कीले नेपालबाट युवाहरुलाई रोजगारीमा सेटल गरिदिन्छु भन्दै चर्को रकम असुली गरेर कोमलको समुहका अर्का पार्टनर राजन शाह ठकुरीको सम्पर्कमा पठाउने गरेको पाइएको हो । कार्कीले पठाएका व्यक्तिहरु यतिबेला दुबईमा विचल्ली परेका छन् । तर, उनी भने अहिलेसम्म कोहीलाई पनि विचल्ली नबनाएको दाबी गर्छन् ।
काठमाडौंको ‘म्यानपावर बजार शम्भुमार्ग’मा कार्यालय रहेको ‘डिडि ह्युम्यान रिसोर्स प्रा.ली’ नामक कम्पनि मार्फत कार्कीले भिजिट भिषामा मानव तस्करी गर्दै आएका छन् ।
‘कार्कीले दुबई पुर्याएका नेपाली युवाहरु सिढिमा सुत्नुपरेको छ । विचल्ली भएपछि हामीलाई सम्पर्क गरेका छन्,’ दुबईबाट पीडितको भनाई उदृत गर्दै स्रोतले भन्यो,‘प्रति व्यक्ति ६ लाख रुपैयाँसम्म लिएर बेनीले नेपाली युवालाई दुबई पुर्याएका छन् ।’
आश्चर्य त के भने युवा संगठनको हकहितका लागि भन्दै गठित भएको नेकपा एमाले निकट युवा संघ नेपालकै सचिवालय सदस्य समेत कार्की छन् । त्यति मात्रै होइन उनी एक मिडिया समेत चलाउँछन् । उनले आफू पनि मिडिया सञ्चालकरहेको भन्दै दियोपोस्टकर्मीलाई फोन गरेर बताएका छन् । ‘म पनि मिडियाकर्मी हुँ । सानोतिनो गल्ती सबैको हुन्छ । हामी त एक अर्कालाई यसो छ है भन्छौँ,’ कार्कीको अडियो रेकर्डमा भनिएको छ,‘तपाईंलाई समाचार कसले दिएको हो त्यसको नाम थाहा पाउन पाए हुन्थ्यो । त्यति दिनुस् ।’
उनले आफू डिजिटल मिडिया नेक्स्ट प्रा.लीको अध्यक्ष रहेको समेत बताए । उनले सामाजिक सञ्जालमा युवा संघका इन्चार्ज महेश बस्नेत र अध्यक्ष किरण पौड्यालसँगैको तस्विर समेत राखेका छन् । यद्धपी अध्यक्ष किरण पौड्याल र महेश बस्नेतलाई भने कार्कीको यो धन्दाबारे जानकारी नभएको स्रोतले बतायो । पूर्व माओवादी हुँ भन्दै उनी एमाले प्रवेश गरेको समेत युवा संघकै एक सदस्यले बताए ।
यता कार्कीले भने आफूलाई राजनेले गलत काम गरेर फसाएको अडियो रेकर्ड प्राप्त भएको छ ।
राताे घेरामा महेश बस्नेत र बेनी कार्की / अनुहार छाेपिएका व्यक्तिसँग यस समाचारकाे कुनै पनि सम्बन्ध छैन ।
‘मान्छेले काम गर्दा कहिलेकाँही विग्रिन्छ । जानी जानी गरेको होइन । हेर न मा…ला राजानेले अहिलेसम्म १४/१५ वर्ष भो काम गरेको अहिलेसम्म यस्तो नगरेको । राजनेले ५÷६ जना ट्रायलमा हाल पछि फेरी ६०÷७० जना डिमान्ड बनाउँछु भनेर लु ठिकै छ गरुँ भनेर गरेको यो हालत भो,’ अडियो रेकर्डमा कार्कीले भनेका छन्,‘कसैको ट्रस्ट नै नहुने रहेछ ।’
एमाले निकट युवा स‌घ अध्यक्ष किरण पाैड्यालसँग बेनी कार्की
उनले राजने भनेर नाम लिएको व्यक्ति राजन ठकुरी हुन् । ठकुरी र कोमल उपाध्याय मिलेर दुबईमा सयौँ नेपाली विचल्ली बनाएका छन् । उनीहरुलाई कारबाहीको तयारी भइरहेको श्रम मन्त्री किशान श्रेष्ठले बताए ।
मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार कोमललाई कारबाहीका लागि मानब बेचविखन अनुसन्धान ब्युरोलाई अनुरोध गरिएको छ । त्यस्तै कोमलकी श्रीमती रञ्जना ढकाल प्याकुरेलको बैंक खाता रोक्का गर्न समेत पत्राचार गरिएको छ ।
मंगलबार, माघ ११, २०७८ | १७:२७:४०